Guddoomiye ku xigeenka Barlamaanka somaaliya oo go’aamo kasoo saaray mooshinka Farmaajo – Radio Daljir
Diseenbar 10, 2018 1:55 g 1
Guddoomiye ku xigeenka 2aad ee Golaha Shacabka Mahad Cabdalla Cawad oo shir Jaraa’id ku qabtay Muqdisho ayaa amar ku bixiyay in aan lagu shiri Karin Xarunta Guddiyada Golaha Shacabka inta uu jiro khilaafka ka dhashay mooshinkii Madaxweyne Farmaajo.
Mahad Cabdalla Cawad ayaa War-Saxaafadeed uu soo saaray waxa uu ku go’aamiyay.
1: In Maamulka Golaha ee uu ugu sareeyo xogheyaha Golaha uu mas’uul ka yahay howl socod siinta Go’aamadii ka horeeyay khilaafka, isla markaana uusan fulin karin G’aamo Maamul iyo maaliyadeed oo aysan ka wada tashan Xafiiska Guddoonka ka wada tashan.
2: In Xildhibaanada kala aragtiyada duwan aysan u isticmaali karin kulamadooda siyaasadeed hoolka shirarka ee Guddiyada Golaha Shacabka ee Villa Hargeysa.
3:- In Xarunta Golaha Shacabka ay u dhaxeeyso dhamaan Xildhibaanada lagana ilaaliyo in koox aragti gaar ah wadato ay u adeegsato hanaan guddoonka Golaha isku waafaqsaneyn
4: In Maaliyadda iyo miisaaniyadda Golaha loo maareeyo hanaan leysku waafaqsan yahay kana wada tashadeen Guddoonka iyo Xafiiska Golaha.
5: In aanan aqoonsaneyn Guddiga maaliyadda iyo miisaaniyadda Golaha Shacbaka ee la kala diray 28 Bishii la soo dhaafay anaga oo u soo jeedineyna Guddoomiyaha Golaha Shacabka in uu guddoonku ka heshiiyo dhismaha guddi uu waqtigiisu ku egyahay maareynta miisaaniyadda Sanadka 2019 iyo xisaab xirka 2017,iyada oo la deegsanaya xeer hoosaadka 56aad farqada 6aad.
Ok mahad ma hadli kartid hadii ayan ku shiri karin villa baydhabo
Or hargaysa midood qolooyinka mooshinka wata dadku waa xor we are not ethiopian or eretrea
We are somaliyan, marxuum maxamed
Baa wadankan ku cayaaray hadana waa wiikuu adeerka u ahaa layaab